Covid-19 ကပ်ရောဂါ၏ စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများနှင့် ရေနံဈေးနှုန်းရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်း | Commerce
Covid-19 ကပ်ရောဂါ၏ စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများနှင့် ရေနံဈေးနှုန်းရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်း
Thu, 09/17/2020 - 08:46 -- competition
မကြာသေးမီက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်၌ ရေနံဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းသည် ရောင်းလိုအား၊ ဝယ်လိုအားပြဿနာများနှင့် အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်၍ သေချာရေရာမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဈေးကွက်များ ပြိုလဲပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ဈေးနှုန်း ရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းရင်းများက အဘယ်နည်း? ၎င်းသည် ရေနံ တင်ပို့/တင်သွင်းမှုစီးပွားရေးအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း?
ကမ္ဘာအနှံ့အပြား Covid-19 ကူးစက်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် ကျောက်မီးသွေးကဲ့သို့သော သဘာဝစွမ်းအင်များသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ဈေးကွက်တွင် ဝယ်လိုအားကျဆင်းလျက်ရှိသည်။ ရေနံဝယ်လိုအားကျဆင်းသွားရခြင်းမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းမှု၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာမှုများ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ နိုင်ငံအများစုတွင် Lockdown ချထားခြင်းနှင့် quarantine ထားရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ရေနံကို အဓိကအသုံး အများဆုံးမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖြစ်သည့်အတွက် ရေနံဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုသည် သိသာထင်ရှားမှု အရှိဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းသုံးစွဲမှု သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအသစ်များ ကျဆင်းခြင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ခရီးသွားလာမှုများ ကျဆင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်များမှတစ်ဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနှင့် အခြားကဏ္ဍများတွင် ဝယ်လိုအားများ အလွန်အမင်းကျဆင်းနေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုတို့အတွက် ထောက်ပံ့မှုများပြတ်တောက်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အသုံးစရိတ်များဆီသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားခြင်း တို့သည် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ရေနံဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကို ထိခိုက်နေသည့် အကြောင်းအရာများထဲမှ တစ်ချို့သာဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုနောက်ပိုင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တစ်ရက်လျှင်စည်ပေါင်း ၉.၃ သန်း စံချိန်တင်ကျဆင်းမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ စွမ်းအင်အေဂျင်စီ၏ အဆိုအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ယခင်နှစ်ထက် တစ်ရက်လျှင် စည်ပေါင်း ၂၃.၁ သန်း လျော့နည်းမည်ဟု ခန့်မှန်းထား ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ Covid-19 ကူးစက် ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ရေနံဝယ်လိုအားကျဆင်းရခြင်း အကြောင်းရင်းအတိအကျမှာ အစိုးရ၏ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများနှင့် စီးပွားရေးလှုံ့ဆော်မှုမူဝါဒများဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမည်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည် ဆိုသည့်အပေါ်တွင်သာ မူတည်နေပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စွမ်းအင် အေဂျင်စီ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ခန့်မှန်းခြေမှာ အကောင်းမြင်သော ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ရေနံတင်ပို့ရောင်းချသည့်နိုင်ငံ များအဖွဲ့ (OPEC) က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် တစ်ရက်လျှင် ရေနံစည် ထုတ်လုပ်မှုပေါင်း ၁.၅ သန်း လျှော့ချရန် အဆို တင်သွင်းခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် ၁ သန်းမှာ OPEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပြီး ၀.၅ သန်းမှာ OPEC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သည့် အထူးသဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံကဲ့သို့ ရေနံထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်ရက်တွင် ရုရှားနိုင်ငံက ထိုအဆိုပြုချက်ကိုပယ်ချခဲ့ပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျကလည်း အဓိကဈေးကွက်များတွင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး မကြံစဖူးလျှော့ဈေးကို ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ရေနံတစ်စည်ကို ၃၁.၁ ဒေါ်လာအထိ ဈေးနှုန်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပြီး ရေနံလုပ်ငန်း အကျပ်အတည်းမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ Covid-19 ကြောက်ရွံ့မှုများ နှင့်အတူ ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုများကြောင့် ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးနှုန်းသည် တစ်စည်လျှင် ၁၁.၅၇ ဒေါ်လာအထိ ထပ်မံကျဆင်းခဲ့သည်။
ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့ရေနံတင်ပို့မှုသည် မေလတွင် ၁၂ သန်းအထိ ကျဆင်း သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ OPEC+ သည် သဘောတူညီ ထားသော အခြေခံအဆင့်မှ ၉.၇ သန်းလျှော့ ချပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံတို့နှင့်အတူ အခြားနိုင်ငံများကလည်း ထပ်မံလျှော့ချခြင်း တို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤသို့ဝယ်ယူမှုလျှော့ချခြင်းသည် လက်ရှိ ဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုအတွက် ကြီးမားလွန်းခြင်းမရှိဘဲ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းလိုအားများနေဆဲဖြစ်သည်။
ရောင်းလိုအားပိုလျှံခြင်း၊ ဝယ်လိုအားကျဆင်းခြင်းနှင့် အနာဂတ် မသေချာမရေရာခြင်း အားလုံးတို့ကြောင့် ရေနံဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ရေနံဈေးနှုန်းကျဆင်းလာခြင်း သည် ရုရှားနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ နှစ်နိုင်ငံလုံးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ထိုနှစ်နိုင်ငံလုံး၏ ရေနံထုတ် လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် အတော်အတန်နည်းပါးသော်လည်း ၎င်းတို့၏အစိုးရဘတ်ဂျက်နှင့် ပို့ကုန်တို့သည် ရေနံဝင်ငွေပေါ်တွင် များစွာမူတည်နေပါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်ကို ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် ရေနံတစ်စည်ကို ၇၈.၃၀ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် အရင်းကျေနိုင်မည့်နှုန်းထားမှာ ဒေါ်လာ ၄၀ ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေနံဈေးနှုန်း ဤသို့နိမ့်ကျနေခြင်းသည် ထိုနိုင်ငံများ၏ အစိုးရဘတ်ဂျက်များ ကိုပါ လျော့နည်းသွားစေပြီး သိသာသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပွား စေနိုင်ပါသည်။
ရေနံတင်ပို့မှုသည် အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘရူနိုင်း၊ ကာဇက်စတန်၊ ကူဝိတ်၊ အီရတ်၊ အီရန်၊ အိုမန်၊ ကာတာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် ဗန်နီဇွဲလားကဲ့သို့သော ရေနံထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံများ၏ အဓိက ဝင်ငွေရရှိမှုကဏ္ဍဖြစ်သောကြောင့် ရေနံဈေးနှုန်းများကျဆင်းခြင်းသည် ၎င်းနိုင်ငံများ၏ အစိုးရ ဘတ်ဂျက်ကို လျော့နည်းသွားစေပါသည်။ ၎င်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအစီအမံများကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပွားစေနိုင်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အရေးအကြီးဆုံးမှာ Covid-19 ကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍအား အစိုးရရန်ပုံငွေ လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် ကျောက်မီးသွေးများ၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် လောင်စာဆီ ကုန်ကြမ်းများအပေါ်မှီခိုနေသော ပို့ကုန်များ အတွက်လည်း ဆိုးကျိုး သက်ရောက်စေပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတို့သည် လောင်စာဆီ ကုန်ကြမ်းများအပေါ်တွင် မှီခိုနေပြီး လက်ရှိရေနံဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွင် အစိုးရ၏အခွန်ဘဏ္ဍာများလည်း ကျဆင်းသွားပါသည်။
ရေနံဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့် စီးပွားရေးအပေါ် တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
ယခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရသကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာကျဆင်းသွားသောအခါ (ဈေးနှုန်းများ အနှုတ်လက္ခဏာ ပြလာသောအခါ) ရေနံစိမ်းတင်ပို့သူများ၏ ဝင်ငွေလျော့နည်းသွား ခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့တိုင်းပြည်၏ စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး (GDP) အပေါ် တိုက်ရိုက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ရေနံစိမ်းတင်သွင်းသူများအတွက် ရေနံဈေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းသည် အပြုသဘောဆောင်သော ရောင်းလိုအားရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် လောင်စာစွမ်းအင်တင်သွင်းသူများထံမှ လောင်စာစွမ်းအင် ဝယ်လိုအား တိုးတက်လာခြင်းသည် ရေနံတင်သွင်းသူများအတွက် အပြုသဘောဆောင်သော သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ် သည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤသည်မှာ သာမန်ကိစ္စအတွက်သာ ဖြစ်ပြီး ယခု လက်ရှိအခြေအနေမှာ သာမန်အခြေအနေမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ဗိုင်းရပ်စ်ဘေးဒဏ်ခံစားနေရ သောနိုင်ငံများတွင် ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုကိုရပ်တန့်နိုင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်မဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ထားရပြီး အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက နိုင်ငံသားများအား အိမ်ထဲတွင်သာနေခိုင်းထားသဖြင့် ရေနံတင်သွင်းသူ များ၏ဝယ်လိုအားမှာ ကျဆင်းလျက် ရှိပါသည်။ ဤအစီအမံများကြောင့် ရေနံဝယ်လိုအားကျဆင်းပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတို့ကို ရပ်တန့်သွားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေနံစိမ်း တင်ပို့သူများအပေါ် သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အနေဖြင့် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်သော်လည်း တိုက်ရိုက်အကျိုး သက်ရောက်မှုနှင့် သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့၏ စုစုပေါင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့မှာ များစွာကြီးမားနိုင်ပါသည်။ အနှုတ်သဘောဆောင်သော စုစုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် စွမ်းအင်တင်ပို့ရောင်းချသူများ၏ ဝင်ငွေကို မျှော်မှန်းထား သည်ထက်ပို၍ လျော့နည်းသွားစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်မည်ဆိုလျှင် ရေနံဈေး တဟုန်ထိုးကျဆင်းမှုသည် ရေနံစိမ်း တင်သွင်းသူများအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု(၂)ခုဖြစ်စေသည် - တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက် မှုအနေဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော ရောင်းလိုအား ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုသည် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပင် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ ရေနံစိမ်းတင်ပို့ ရောင်းချသည့် နိုင်ငံများ၏ ဝင်ငွေများလျော့နည်းသွားခြင်းသည် သွယ်ဝိုက်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုပင်ဖြစ်သည်။) ရေနံတင်ပို့ သည့်နိုင်ငံများကို (မော်တော်ကားများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော) ကုန်ချောပစ္စည်းများတင်ပို့မှုကို လျှော့ချစေခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အသားတင်အမြတ်ကို လျော့နည်း သွားစေပါသည်။
သို့သော်လည်း လက်ရှိ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါသည် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာဝယ်လိုအား အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့တွင် စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှု အများဆုံးကဏ္ဍကြီးဖြစ်သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် အကြီး အကျယ် လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ အကျိုးဆက်ရှိနေချိန်တွင် ရေနံဈေးနှုန်း မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ကျဆင်းလျှင် သုံးစွဲသူများအတွက် အကျိုးရှိမည် ဆိုသည်ကို ဝယ်လိုအား မလုံလောက်သေးသည့်အတွက် ရှင်းလင်းစွာ မသိရှိနိုင်သေးပါ။
နောက်ဆုံးတွင် Covid-19 အကျိုးဆက်နှင့် လက်ရှိရေနံဈေးနှုန်း ကျဆင်းမှုတို့အတွက် စီးပွားရေးများအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ်ရာတွင် တစ်ဖက်သက် ဆန်းစစ်မှုသည် မလုံလောက်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသရန် အရေးကြီးပါသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အတင်းအကျပ်ပိတ်သိမ်းမှုကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းများ သိသိသာသာ ဖြစ်ပွားခြင်း၊ နယ်စပ်များပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ခရီးသွားလာမှုကို တားမြစ်ခြင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လူများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကန့်သတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့်စီးပွားရေးကို အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်တစ်လျောက်လုံးအား ပျက်စီးစေပါသည်။
Source : https://www.asiapathways-adbi.org/